‘विवेकशील साझा नेपालको उत्कृष्ट वैकल्पिक शक्ति’ – Samachar Pati
‘विवेकशील साझा नेपालको उत्कृष्ट वैकल्पिक शक्ति’
पोखरा, ११ कात्तिक । देशव्यापी संगठन विस्तारको कार्यक्रमअन्तरगत विवेकशील साझा पार्टीले पोखरामा प्रदेशस्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ । शुक्रबार पोखरामा भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरुको उपस्थिती रह्यो । संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टीको सँयोजकद्वय रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापासँगै केन्द्रीय नेताहरु डा. सूर्यराजआचार्य, केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा विवेकशील साझा पार्टीमाआस्था राख्ने गण्डकी प्रदेशका युवाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सँयोजकद्वय रविन्द्र मिश्र र उज्जवलथापाले विवेकशील साझाको राजनीतिक मूल्य र मान्यताको विषयमा आफ्ना धारणाहरु राखेकाथिए । उनीहरुले नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महशुस भएको र त्यको परिपूर्ती विवेकशील साझाले गर्न सक्ने विचार राखेका थिए । त्यस्तै डा. सूर्यराजआचार्यले विवेकशिल साझा पार्टीको राजनीतिक दर्शन र अर्थतन्त्र विषयमाआफ्नो विचार राखेका थिए । अर्का नेता केशव दाहालले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको औचित्यको बारेमा प्रकाश पार्दै विवेकशील साझा पार्टी अब नेपालको वैकल्पिक पार्टी भसकेको ठोकुवा गरेका थिए ।
युवा नेतृ रञ्जु दर्शनाले युवा पुस्ता राजनीति र सामाजिकअभियानको विषयमा बोलिन् । उनले युवा पुस्ताबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव भएको बताउँदै राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेशले विशेष अर्थ राख्ने बताईन् । प्रदेश स्तरिय कार्यक्रमको व्यवस्थापनको जिम्माविवेकशील साझाको जिल्ला कमिटिले गरेको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश भित्र पर्ने विभिन्न जिल्लाबाट १ सय जना उत्प्रेरकहरु सहभागी भएको जिल्ला सचिवालयका सदस्य सुरेश पहारीले जानकारी दिएका थिए ।
विश्वराज पौडेलले कार्यक्रमको संचालन गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित उत्प्रेरकहरुलाई चिरञ्जिवीअधिकारीले स्वागत गरेका थिए भने निर्देश सिलवालले धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए । विवेकशील साझा पार्टीकाअनुसार शनिबार पार्टीको प्रदेश सँयोजक घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उसले यो कार्यक्रम गैहपाटनस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा गर्ने जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सँयोजक घोषणाका लागि पार्टीले विशेष तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सँयोजकको घोषणालाई लिएर विभिन्न चासो र जिज्ञासाहरु आउन थालेको जिल्ला सचिवालयले जनाएको छ ।
भलामको हरिहर गुफामा नगद तथा फलफूल वितरण
सन्ध्याको गजल प्रतिभा पुरस्कार स्याङ्जाका जीवनपानीलाई
म्याराथन सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेहरुमा मंच द्वारा आभार व्यक्त